Japon : Hanampy hanara-maso ny zotram-pifidianana -
AccueilSongandinaJapon : Hanampy hanara-maso ny zotram-pifidianana
Japon : Hanampy hanara-maso ny zotram-pifidianana
06/11/2018 admintriatra Songandina 0
Amin’izao ankatoky ny fifidianana izao, namaly ny fangatahan’ny Vaomiera mahaleo tena mikarakara ny fifidianana (Ceni) ny Fanjakana japoney. Araka izany, akoatra ny fanampiana hafa izay efa nentiny, nandefa iraka mpanara-maso ny fifidianana ho Filoham-pirenena, fihodinana voalohany, ny 7 novambra izao, ny governemanta japoney, delegasiona izay tarihin’i Ito Yorio.
Noraisin’ny Fanjakana japoney izany mba hisian’ny fifidianana tsy mitanila sy marina eto Madagasikara. Voalaza fa tafiditra indrindra amin’ity iraka ity ny fanaraha-maso ny fikarakarana sy ny zotram-pifidianana ary indrindra ny latsa-bato eto Madagasikara. Aorian’izay kosa, izany hoe, aorian’ny fifidianana fihodianana voalohany, hanao tatitra eo anivon’ny Fitondram-panjakana malagasy ireo iraka japoney ireo.
Voalaza fa tafiditra amin’izao fanampiana ny Ceni izao ny fanamafisan’i Japon ny demokrasia eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fanohanan’izy ireo hatrany ny firenena, indrindra eo amin’ny lafiny fiaraha-miasa amin’ny sehatra maro, toy ny fampandrosoana ara-toekarena, ny ara-barotra, ny sosialim-bahoaka toy ny tontolon’ny fambolena, sns.
Na izany aza, anisan’ny mahagaga sy mahatalanjona dia ny fitsabahan’ireo firenena vahiny mivondrona ao amin’ny Vondrona Eoropeanina, Vondrona Afrikanina, ny Organisation Internationale de la Francophonie, sns, amin’ny fifidianana ho Filoham-pirenena eto Madagasikara. Raha ny marina, tsy matoky ny Ceni, izay mpitantanana ny fifidianana, izany ve ireo mpiara-miombon’antoka mahazatra tamin’i Madagasikara ireo? Ny Ceni rahateo tsy mahafehy ny asa sy andraikitra sahaniny ka mila vonjy hatrany. Hany ka ireo vahiny indray no mibaiko ity rafitra mahaleo tena iray eto amintsika ity, eny, hatramin’ny fanokafana indray ny lisim-pifidianana izay tsy tokony nosokafana intsony taorian’ny fanakatonana azy ny 15 avrily lasa teo…
« Malaza tsy hihinanana tahaka ny vilian-tsahona ». Izay no azo ilazana ireo depiote nanao fanambarana miezinezina sy naely mafy fa nivadika nanohana an’i Andry Rajoelina. 39,23% no azon’i Andry Rajoelina nandritra ny fihodinana voalohany, ...Tohiny
Vina Fisandratana 2030 : Nampahafantarina tany Moscou
Vondrona Eoropeanina : Manamafy ny tokony hisian’ny fifidianana
Raharaha « Orlando Robimanana » : Aiza ny Smm ?